MACLUUMAADKA TARANKA TOY POODLE DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Toy Poodle Dog iyo Sawirro
Nellie the Toy Poodle da'da 5 sano
Marka loo hagaajiyo si loo muujiyo heerarka eyga jirka waxaa looga jeedaa inuu bixiyo muuqaal laba jibbaaran. Qiyaastii waa dherer la mid ah dhererka meesha engegay. Dhakada ayaa si dhexdhexaad ah loogu soo koobay joogso yar laakiin sugan. Waxay leedahay gun dheer, oo toosan. Indhaha mugdiga ah, ee u eg oval-ka ayaa xoogaa kala fog oo waa madow ama bunni. Dheguhu waxay sudhan yihiin meel u dhow madaxa wayna dheer yihiin oo fidsan yihiin. Labada lugood ee hore iyo gadaalba waxay u dhigmayaan cabirka eeyga. Khadka sare waa heer. Dabada ayaa la dhigay oo kor loo qaaday. Mararka qaarkood waxaa lagu xiraa kala bar dhererkiisa ama ka yar si eygu u ekaado mid dheellitiran. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Cagaha u eg-oval-ka way yaryihiin oo suulasha ayaa qalooca. Koodhku waa mid duuban ama xadhig leh. Waxay ku jirtaa dhammaan midabada adag oo ay ku jiraan madow, buluug, qalin, cawl, kareem, abrikot, casaan, caddaan, bunni ama kafate-au-lait. In kasta oo aysan sameynin heerka bandhigga qoran, kuwa wax soo saara qaarkood ayaa tarma Poodles midabbo kala duwan leh. U fiirso qurxinta noocyada kala duwan ee Poodle clips.
Toy Poodle waa mid caqli badan. Si aad u jawaab celin badan, waxaa la sheegay inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu tababbarka badan. Macaan, farxad, qosol iyo nool, waxay jeceshahay inay dadka la joogto. Farxad leh, aad u xiiso badan oo xiiso badan. Bulsho eeyahaas sifiican. Waxay ka sameeyaan waardiyeyaal aad u wanaagsan cabbirkooda. Iyadoo aan lahayn nooca saxda ah iyo xaddiga jimicsiga waxaa laga yaabaa inay yihiin dad sare oo xishood badan. Haddii aadanuhu uusan ahayn 100% hogaamiyaha xirmada , Waxaa laga yaabaa inay soo qabtaan haddii la jeesjeeso ama lala yaabo. Baaskiilka Caruurta lagu ciyaaro ayaa guud ahaan ku wanaagsan xayawaannada kale iyo eeyaha. Haddii aan la siinin sharciyo la raaco oo la xaddido waxa ay yihiin iyo kuwa aan loo oggolayn inay sameeyaan, noocani wuxuu u muuqan doonaa inuu ciyo badan. Ha u ogolaan eeygan yar inuu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya eeygu aaminsan yahay inuu hogaamiyaha u yahay aadanaha. Tani waxay keentaa heerar kala duwan arrimaha dhaqanka , oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, qabsashada, oohinta, ilaalin , dalbanaya, aaminaad darro carruurta iyo mararka qaarkood dadka waaweyn, xasaasi ah, kacsan, oo lagu habeeyay shisheeyayaal iyo qeyla-dhaan xun, sida eygu isku dayo inuu dadka ugu sheego waxa uu isagu doonayo inay iyagu sameeyaan. Eygan yar wuxuu ku fiicnaan karaa carruurta, hase yeeshe waxaa badanaa lagula taliyaa carruurta waaweyn ee yaqaan sida loo yaqaan muujiyaan xirfadaha hoggaaminta . Sababta ayaa ah in bini'aadamka intooda badani eyda ula dhaqmaan si taas oo ka dhigaysa mid aan la hubin cidda hoggaamiye kooxeedku ku jiro xiriirka aadanaha iyo eyga . Eyga, maskaxdiisa, wuxuu ku qanacsan yahay inuu yahay hogaamiyaha aadanaha . Kuwani maahan astaamo lagu ciyaaro Ciyaaraha Poodle, laakiin waa astaamo ay keeneen milkiilayaal jilicsan. Hubso inaad tahay eeygaaga mid adag, joogto ah, hoggaamiye baako kalsooni leh, oo wax bixinaya jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah si loo helo eey aamin ah, maskax ahaan deggan.
Dhererka: ilaa 10 inji (25.4 cm)
Miisaanka: 6 - 9 rodol (3 - 4 kg)
Tirada noocyada rasmiga ah ee loo yaqaan 'AKC' ee loo yaqaan 'Poodle breeds' waxaa lagu go'aamiyaa dherer, ma'aha miisaanka. Poodle Toy waa 10 inji ama ka hooseeya barta ugu sareysa garbaha. Poodle kasta oo in ka badan 10 inji ku yaal barta ugu sarreysa garbaha kuma tartami karo giraanta showga AKC ee ah Toy Poodle.
Nooc cimri dheer, Poodles waa, si kastaba ha noqotee, waxay ku xiran tahay cuduro badan oo hidde ah. Qaarkood waxay u nugul yihiin IMHA (Immune Mediated Hemolytic Anemia), xiiqda oo siibatay, macaanka, suuxdinta, xanuunada wadnaha, PRA, indhaha oo qulqulaya, dhegaha iyo caabuqyada dhibaatooyinka dheefshiidka. Dhibaatooyinka indhaha sida indho-beelka iyo atrophy retinal-ka ee soo noqnoqda waxay sababi karaan indho la'aan. Xaaladaha maqaarka, oo laga yaabo inay sabab u tahay adeegsiga xirfadaha loo yaqaan 'clippers'. Poodles Brown waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwo cirro ah oo aan qaan gaadhin. Xasaasiyaddu waa wax caadi ah, mararka qaarkood shaamboo iyo / ama midab xoojiye ayey u sabab tahay.
Poodles-yada lagu ciyaaro ayaa ku fiican nolosha magaalada iyo sidoo kale ku noolaanshaha dalka. Marka la siiyo jimicsi ku filan, kuma jiraan firfircoonaan gudaha ah. Way jiifsan doonaan adiga agtaada waana deganaan badan yihiin markay gudaha joogaan, in kasta oo ay jecel yihiin inay banaanka ku ciyaaraan oo ay yihiin nooc caqli badan, sidaa darteed waxay jecel yihiin hawlo badan oo feker leh si ay u kiciyaan maskaxdooda. Waxay sameyn doonaan okay la'aan deyr la'aan.
Kuwani waa eeyo yar yar oo firfircoon oo u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeli doontaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ciyaartu ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida deyr weyn oo ood leh.
12-15 sano ama ka badan
Qiyaastii 3 ilaa 4 eyyo
Qurxin balaaran ayaa loo baahan yahay haddii eeyga la muujiyo. Poodles waa in si joogto ah loo maydhaa oo la xajiyaa lix ilaa sideed toddobaad kasta. Nadiifi oo hubi dhegaha si joogto ah wax ama caarada ama caabuqa oo soo bixi timaha ka soo baxa gudaha kanaalka dhegta. Ilkaha waxay u baahan yihiin miisaan balaaran. Maadaama jaakadu aysan daadin waxay u baahan tahay in la jarjaro. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo loo yaqaan 'Poodle clips'. Kuwa ugu badan ee milkiileyaasha xayawaanku leeyihiin ayaa ah fududaan daryeel ah oo loo yaqaan 'xayawaan xayawaan ah,' 'yar yar' ama 'layd yar' oo ah halka jaakadku ka gaabiyo jirka oo dhan. Muuqaaladda caanka ah ee la soo bandhigayo waa sadarka Ingiriisiga iyo qaybta Qaaradaha halka qaybta dambe ee jidhka la xiirayo, jijimooyin ayaa looga tagayaa hareeraha anqawyada, iyo pom-poms ayaa looga tagaa dabo iyo miskaha. Heerka AKC wuxuu u oggol yahay eey ka yar hal sano in lagu muujiyo aaladda loo yaqaan 'puppy clip' oo leh shuruudo gaar ah sida foorarsiga dhamaadka dabada. Noocyada kale ee koodhka ah ayaa ah koodhka qaaradda ee la beddelay, magaalada iyo waddankiisa, xayndaabka ama agabyada korontada, kaydka xagaaga, iyo Miami ee bikini-ka Poodles wax yar ayey daadiyaan timo la'aan waxayna kufiicanyihiin kuwa xasaasiyadda qaba .
Poodle-ka waxaa caan ku ahaa Galbeedka Yurub oo dhan ugu yaraan 400 oo sano waxaana lagu xardhay sawirro qarnigii 15-naad iyo bas-qabow laga soo bilaabo qarnigii 1aad. Mawduucu waa mid lagu muransan yahay halka eey si rasmi ah loogu horumariyey oo cidina run ahaantii ma oga dhalashada asalka ah ee asalka ah. Faransiiska ayaa qaatay sheegashada asalka, laakiin AKC ayaa sharaf siinaya Jarmalka, halkaas oo ay sheegeen in loo adeegsaday eey biyo ka soo saara. Sheegashooyinka kale waxay ahaayeen Danmark, ama Piedmont-kii hore. Waxa hubaal ah in eeygu ahaa farac ka mid ah hadda-dabar go'ay Eyga Biyaha ee Faransiiska, Barbet iyo suurtagalnimada Hungarian Water Hound. Magaca 'Poodle' waxay u badan tahay inuu ka soo baxay ereyga Jarmalka 'Pudel,' oo macnaheedu yahay 'mid ku ciyaara biyaha.' Muuqaalka 'Poodle clip' ayaa waxaa loogu talagalay ugaarsadayaasha si ay eeyaha uga caawiyaan inay si hufan u dabaashaan. Waxay uga tagi lahaayeen timaha dhinacyada kalagoysyada lugaha si looga ilaaliyo qabow daran iyo cawsduur fiiqan. Ugaarsadayaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa u isticmaalay Poodle sida gundog iyo dib u habeyn haadka shimbiraha iyo urinta shixnadaha waaweyn ee dhigta dhulka hoostiisa. Faransiisku wuxuu bilaabay inuu u adeegsado taranka inuu noqdo jilaa circus sababtoo ah eeyga sirdoonka sare iyo tababbarka. Noocani wuxuu caan ku noqday Faransiiska, taas oo keentay magaca caanka ah ee 'French Poodle,' laakiin dadka Faransiiska dhab ahaan waxay ugu yeeraan 'Caniche,' oo macnaheedu yahay 'eyga duck.' The Ciyaaraha iyo Poodle Guntin noocyo ayaa laga soo saaray eeyaha waaweyn, maanta loo yaqaan Poodles-ka caadiga ah . Qarnigii 18aad poodle yaryar ayaa caan ku noqday dadka boqortooyada. Saddexda cabbir ee rasmiga ah waa Toy, Miniature iyo Standard Poodle. Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal nooc oo waxaa lagu xukumaa isla halbeeg qoran laakiin leh cabirro kaladuwan oo kala duwan. Bixiyeyaashu sidoo kale waxay tarmayaan cabbirka udhaxeeya ee loo yaqaan a Klein Poodle (Dhexdhexaad Poodle) iyo mid ka yar Shaaha Poodle . Qaar ka mid ah hibooyinka Poodle-ka waxaa ka mid ah: dib u soo ceshanid, firfircoonaan, ilaalin, adeecid tartan iyo qabashada tabaha.
Lacagta waxaa qaaday Jennifer Lopez inta lagu gudajiray ficilkii furitaanka ee telefishanka caalamiga ee 28th Abaalmarinta Muusikada Ameerika. Lacagta caddadku waa lix rodol oo keliya. Lahaanshaha sawirka Donmar Toy iyo Miniad Poodles
Wacky the Toy Poodle at 2 sano jir— 'La kulan xayawaanka aan jeclahay ee Wacky, oo ah Poodle qurux badan!'
Wacky the Toy Poodle markuu jiray 2 sano
Laba cunug oo caruusada lagu ciyaaro ah! - Sawir qadarin ah Donmar Toy iyo Poodles Miniature
shiba inu xoolo isku dhafka ah
Muuji Poodle-ka Cunnada ee 2 sano jir ah— 'Dude wuxuu ahaa eeyga ugu farxadda badan, eey ugu saaxiibtinimada badanayd abid. Aad buu ii ilaalin jiray. In kasta oo aanan doonaynin markay xaaskaygu guriga keento, haddana wuxuu noqday saaxiibkay ugu fiican. '
Muuji Poodle-ka Caruurta ee 2 sano jir
Ku jiifsada Poodle-ka Cunnada isagoo jira 12 sano— 'Cuncunno waa indhoole sonkorow , laakiin iyadu sifiican ayey u soo socotaa illaa inta aynaan ku wareejinaynin guriga gudihiisa. Waxay qaadataa tallaal insulin ah laba jeer maalintii. '
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Baaskiilka Ciyaaraha
Sawirada Toy Poodle 1
Toy Poodle Sawirada 2
Noocyada Caanka ee Isku Darka Poodle
Poodles rasmi ah oo loo aqoonsan yahay AKC
Noocyada Poodle ee aan ahayn AKC
Eyda Poodle: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
10ka ey ee ugu sareeya ee qaniinaya
badh cocker spaniel nus nus
retriever dahab ah oo lagu qasay poodle
eeyaha culeyskoodu yahay 30 rodol
isku-darka dahabka isku-darka shaybaarka madow
king charles isbaanishka chihuahua mix